Services - Golden Hours Trade
Golden Hours ၏ မြေအောက်ရေရှာဖွေရေး နှင့် စက်ကိရိယာဖြန့်ဖြူးရေးတာဝန်ခံအဖွဲ့သည် ဘူမိဗေဒ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့၌ ကျွမ်းကျင်ပြီး စည်းကမ်းလိုက်နာသည့် ပညာရှင်များဦးဆောင် သောအဖွဲ့ဖြစ် ပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှ Japan International Cooperation Agency(JICA) ပူးတွဲ၍ မြေအောက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများကို မြန်မာနိုင်ငံ ရေရှားဒေသများတွင် ကျေးရွာအကျိုးပြု Project များကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါ သည်။
Golden Hours မှအတွေ့အကြုံနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာတတ်သော ဦးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် လုပ်သားများသည် မြေအောက်သယံဇာတရေကြော၊ ရေနေရပ်ဝန်းရှာဖွေခြင်း၊ တွင်းတိမ်တွင်းနက်(စက်တွင်း၊လက်တွင်း)ကို မြန်မာနိုင်ငံ တွင်းရေလိုအပ်သော ဒေသများတွင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေရာ၊ ချောမွေ့အောင်မြင်မှုများရရှိခဲ့ခြင်း၊လုပ်ငန်းအစမှအဆုံးတိုင်တာဝန်ယူခြင်းတို့ကြောင့် ထင်ရှားသောဝန်ဆောင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ်နေရာရရှိခဲ့ပါသည်။
Golden Hours သည်ဂျပန်နိုင်ငံ OYO CORPORATION ၏တရားဝင်ဖြန့်ချိရေးတာဝန်ရရှိထားခြင်း၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံ IRIS INSTRUMENTS CO., LTD ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းမှာယူစုံစမ်းရေး ဗဟိုဆက်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်ရရှိထားခြင်းတို့ကြောင့် နည်းပညာ နှင့် စက်ကိရိယာများကို လိုအပ်သော အသင်းအဖွဲ့ ၊ ကုမ္ပဏီများအတွက် တာဝန်ယူဆက်သွယ်ဝန်ဆောင်ပေးပါသည်။
Golden Hours သည် United Nation အသိမှတ်ပြု Global Compact အဖွဲ့အစည်း၏အဖွဲ့ဝင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။
ကန်ထရိုက်အိမ်ယာဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေး
Golden Hours သည် ကန်ထရိုက်အိမ်ယာ၊ အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ငန်း အပ်သူများနှင့် ညှိနှိုင်းကာတာဝန်ယူဆောက်လုပ်ပေးပါသည်။
H-Beam, I-Beam, Round bar, Angle-bar, Round Tube, Square Tube, Right-angled Tube, Cement, Bentonite တို့ကို GoldenHours မှ စျေးနှုန်းချိုသာမှန်ကန်စွာ ရောင်းချဖြန့်ဖြူးလျက်ရှိပါသည်။
ရောင်စုံဒီဇိုင်းမျက်နှာကျက်များ၊ အမိုးလွှာ၊ ကြမ်းခင်၊ နံရံကာ နှင့် အလှဆင် ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး အစည်းဝေးခန်းမ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဘုရားစေတီတန်ဆောင်း အလှဆင်မိုးရေခံ ရောင်စုံဒီဇိုင်း မျက်နှာကျက်များနှင့် ကြမ်းခင်းအမျိုးမျိုးတို့ကို ရောင်းချခြင်း၊ဝန်ဆောင်ပေးခြင်းများကို စျေးနှုန်းချိုသာစွာ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
Golden Hours ၏လုပ်သားများကို အတွေ့အကြုံရှိသူများ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသိနှင့် နည်းစနစ်ကျွမ်းကျင်သူများဖြင့် ဦးဆောင်စေပြီးရှင်သန်တိုးတတ်နေသောtechniques အသစ်များကို မျက်ခြေမပြတ်စေဘဲ တာဝန် ယူဆောင်ရွက်စေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံရှိ လူနေရပ်ကွက်များနှင့်သာမက စိုက်ပျိုးရေး ကိရိယာများတွင်ပါ သန့်ရှင်းကြည်လင် သောရေများကို ဖော်ထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
Instruments for Geophysics ,Geology,Environmental and Geotechnical Monitoring, Nom – Destructive Testing and Structure Control စသောပစ္စည်းကိရိယာ များ အပါအဝင် Geophysical Instruments များကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးပါသည်။
Golden Hours Company Limited:
Golden Hours Company သည် ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာနှင့် သဘာဝ ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ အတတ်ပညာရှင်များ၊ အသိပညာရှင်များနှင့် အတွေ့အကြုံရှိ ဝန်ထမ်းများ ပေါင်းစု ဖွဲ့စည်းကာ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများနှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိသည်။View Profile
Good SupplyGood Service
NO.1030 - 1032, Thumingalar Road, 16/1-Ward, Thingangyun Town-Ship, Yangon, Myanmar.
Call : +(951)-578315, +(951)-570518, +(959)-5002900, +(959)-974333130
Messenger : Golden Hours
Email : [email protected]ourstrade.com , [email protected]
Website : www.goldenhourstrade.com
Copyright © 2020 Golden Hours Limited. All Rights Reserved. Developed by OrientWebs